Ndị mmepe Trident OS na-akwagharị sistemụ site na BSD ruo Linux | Site na Linux
Fewbọchị ole na ole gara aga ndị Emepụtara ndị mmepe OS Trident site na mgbasa ozi, Mbugharị nke ọrụ ahụ na Linux. Ihe oru Trident na emeputa nkesa onye oru eji eme ihe dika ndi nke PC-BSD na TrueOS.
N'afọ na-abịa, ekpebiri ya ịnyefe nsogbu Trident na mmepe nke nkesa Linux Void. Ihe kpatara mbugharị si BSD gaa Linux bụ enweghị ike iwepu ụfọdụ okwu na-egbochi ndị ọrụ nkesa.
Akụkụ ndị metụtara gụnyere ndakọrịta ngwaike, nkwado maka ụkpụrụ nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ, yana nnweta ngwugwu. Ọnụnọ nke nsogbu na mpaghara ndị a na-egbochi mmezu nke ebumnuche bụ isi nke oru ngo ahụ: ịkwadebe ebe eserese dị mfe iji.
Mgbe ị na-ahọrọ usoro ọhụụ, amapụtara ihe ndị a:
Ikike iji nchịkọta anaghị agbanwe agbanwe (ghara iwughachi) na mgbe nile emelitere site na isi nkesa.
Reddị mmepe ngwaahịa nwere ike ịkọ (gburugburu ebe obibi kwesiri idobe anya ma dokwaa uzo esi ebi ndu otutu oge).
Ọ dị mfe na nhazi nke usoro (ihe nke ihe pere mpe, mfe iji kwalite, na ngwa-ngwa ngwa na usoro nke usoro BSD, karia monolithic na mgbagwoju anya)
Nnabata mgbanwe site na ndị ọzọ na enwere usoro ntinye na-aga n'ihu maka ule na mgbakọ.
Ọnụnọ nke usoro ihe osise na-arụ ọrụ, mana na-adabereghị na obodo ndị etolitere amalitela kọmpụta desktọọpụ (atụmatụ Trident iji rụkọta ọrụ na ndị mmepe nke nkesa ntọala ma rụọ ọrụ ọnụ iji zụlite desktọọpụ ma mepụta ngwa ọrụ ụfọdụ iji nwekwuo ikike)
Nkwado dị elu maka ngwaike ọhụhụ na mmelite oge niile nke akụrụngwa metụtara nkesa (ndị ọkwọ ụgbọ ala, kernel)
Nke dịkarịrị nso na chọrọ bụ Void Linux nkesa, nke gbasoro ihe nlereanya nke usoro ihe omume mmemme na-aga n'ihu (mmelite na-aga n'ihu, enweghị nsụgharị nkesa dị iche).
Void Linux na-eji njikwa sistemụ ọsọ ọsọ dị mfe iji bido ma jikwaa ọrụ, na-eji njikwa ngwugwu xbps ya na sistemụ ngwugwu xbps-src.
Kama Glibc, a na-eji Musl eme ihe dị ka ọba akwụkwọ ọkọlọtọ na LibreSSL karịa OpenSSL. Void Linux anaghị akwado nrụnye na nkebi na ZFS, mana ndị mmepe Trident ahụghị nsogbu na mmejuputa atụmatụ nke atụmatụ a site na iji usoro ZFSonLinux.
Mkparịta ụka a na Void Linux na-emekwa ka eziokwu ahụ dị mfe na a na-ekesa mmepe ya n'okpuru ikikere BSD.
A na-atụ anya na mgbe ịgbanwee gaa na cha cha Linux na trident ọ ga-ekwe omume ịgbatị nkwado maka kaadị eserese ma nye ndị ọrụ nwere ọgbara ọhụrụ ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala, naee otu esi melite nkwado maka kaadị ụda, nkwanye ụda, tinye nkwado maka ọdịyo gụgharia site na HDMI, melite nkwado maka ikuku na nkwụnye ihe ntanetị na ngwaọrụ na interface Bluetooth.
Ọzọkwa, a ga-enye ndị ọrụ ọrụ nsụgharị ọhụrụ nke mmemme ndị ahụ, usoro nbudata ahụ ga-agbatị ma kwado maka nrụnye ngwakọ na sistemụ UEFI.
Otu ihe ndọghachi azụ nke mbugharị bụ ọnwụ nke gburugburu ebe obibi maara yana ngwa ọrụ ndị TrueOS rụpụtara maka nhazi sistemụ, dịka sysadm.
Iji dozie nsogbu a, ọ na-ezube ide ngbanwe zuru ụwa ọnụ maka ụdị ọrụ ahụ, n'agbanyeghị ụdị sistemụ arụmọrụ. Mwepụta izizi nke mbipụta Trident ọhụrụ ka emebere maka Jenụwarị 2020.
Tupu ịmalite, a naghị achịkwa usoro alpha na beta na-ewuli. Mbugharị na usoro ihe ọhụrụ ga-achọ nnyefe akwụkwọ nke ọdịnaya nke nkebi / ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ndị mmepe Trident OS ga-akwaga sistemụ site na BSD ruo Linux
Kubuntu 19.10 dị ugbu a ibudata, mara ihe dị ọhụrụ
Ha na-achọpụta nsogbu dị na Sudo nke na-enye ndị ọrụ na-enweghị ikike ọrụ dị ka mgbọrọgwụ